My iPhone Na-ekwu, sị 'Ngwaọrụ a enweghị ike ịkwado.' Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
Ogwe ọnọdụ na iphone 6
vidiyo skype anaghị arụ ọrụ na ipad
kedu ka esi edobe ipad gị mgbe ọ naghị agbanye?
iphone 6 vibrate anaghị arụ ọrụ
My iPhone na-ekwu, 'Nke a ngwa nwere ike ghara akwado.' Nke a bụ ndozi!
Ikwunye na iPhone gị iji kwụọ ụgwọ ya, mana ihe anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọ kwụsịrị ịkwụ ụgwọ na mmapụta na-akpali mmasị na-egosi na ihuenyo - gị iPhone na-ekwu “Nke a ngwa nwere ike ọ gaghị na-akwado. ”N’isiokwu a, aga m akọwa ihe kpatara ị ji ahụ ozi a na iPhone gị ma gosi gị ihe ị ga - eme iji dozie nsogbu ahụ.
iphone 7 gbakwunyere na -amalitegharị
Gịnị Mere My iPhone Sị “Nke a ngwa nwere ike ghara akwado”?
Gị iPhone na-ekwu 'Ngwaọrụ a enweghị ike ịkwado' n'ihi na ihe mejọrọ mgbe ị nwara ịpịnye ngwa n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị. A dịgasị iche iche nke ihe dị iche iche nwere ike na-akpata nsogbu:
Gị ngwa abụghị MFi-gbaara.
Sọftụwia iPhone gị anaghị arụ ọrụ.
Ngwa gị dị ọcha, mebie, ma ọ bụ mebie kpamkpam.
Ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị ruru unyi, mebie, ma ọ bụ mebie kpamkpam.
Chaja gị ruru unyi, mebie, ma ọ bụ mebie kpamkpam.
Nzọụkwụ n'okpuru ga-enyere gị ịchọpụta na idozi ezigbo ihe mere gị iPhone na-ekwu 'Nke a ngwa nwere ike ọ gaghị na-akwado.'
Gbalịa ijikọ Ngwaọrụ ahụ ọzọ
Ihe mbụ ị ga - eme mgbe iPhone gị kwuru 'Ngwa a nwere ike ọ gaghị akwado' gbalịrị ijikọ ya ọzọ. Kpatụ ya Gbanyụọ bọtịnụ ma dọpụta ngwa gị site na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị. Pinyeghachi ya ka ị hụ ma otu mmapụta ahụ ọ pụta.
Ngwa gị ọ bụ MFi-asambodo?
Ọtụtụ mgbe, na 'Nke a ngwa nwere ike ọ gaghị na-akwado' mmapụta na-egosi obere oge mgbe ị na-pịnye gị iPhone n'ime a isi iyi na-ana ya. N’ọtụtụ oge, eriri nkwụnye ụgwọ ị na - achọ ịkwụ ụgwọ iPhone gị abụghị nkwenye MFi, nke pụtara na emeghị ya ka ọ bụrụ ụkpụrụ ọkọlọtọ Apple.
Ngwunye ugwo ị nwere ike ịzụta na ọdụ ụgbọ ala gị ma ọ bụ ụlọ ahịa dollar ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị MFi ka enyere ya aka n'ihi na ọ dị ọnụ ala. Mgbe ụfọdụ, ndị a Gịnị nwekwara ike ime ka ịrịba mmebi gị iPhone site ekpo oke ọkụ ya .
Ọ bụrụ na enwere ike, were eriri gị iPhone were eriri ya wee bịa. Ọ bụrụ na eriri nkwụnye ụgwọ nke iPhone gị bịara na-adịghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịgbanwe ya maka nke ọhụrụ na Applelọ Ahịa Apple dị n’ógbè gị, ọ bụrụhaala na atụmatụ AppleCare kpuchiri iPhone gị.
Gị iPhone nwere ike na-asị 'Nke a ngwa nwere ike ọ gaghị na-akwado' n'ihi na nke obere software glitch. Mgbe ị na-etinye ngwa n'ime ọdụ ụgbọ mmiri nke iPhone gị, nke iPhone gị ngwanrọ na-ekpebi ma ọ bụ jikọọ na ngwa.
Gbalịa ịmalitegharị iPhone gị, nke nwere ike idozi obere nsogbu software mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone 8 ma ọ bụ tupu, pịa ma jide bọtịnụ ike , wee swipe akara ngosi ikike n'aka ekpe gaa-aka-nri gafee ngosipụta ahụ. Usoro a yiri nke iPhone X, XS na XR, ewezuga gị pịa ma jide bọtịnụ Side na bọtịnụ olu ruo slide ka ike gbanyụọ na-egosi.
Chere 15-30 sekọnd, wee gbanwee iPhone gị site na ịpị na ijide bọtịnụ ike (iPhone 8 na mbụ) ma ọ bụ bọtịnụ Side (iPhone X na ọhụrụ). Ozugbo iPhone gị tụgharịrị, gbalịa ijikọ ngwa gị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, mgbe ahụ ngwanrọ ngwanrọ na-akpata nsogbu ahụ! Ọ bụrụ na ị ka na-ahụ mmapụta na iPhone gị, gaa na nzọụkwụ ọzọ.
Nyochaa ngwa gị
Ugbu a na ị kpochapụrụ ohere nke eriri na-akwụ ụgwọ na-abụghị nke MFi kwadoro na obere nsogbu sọftụwia, ọ bụ oge inyocha ngwa. Imirikiti oge, ngwa ị na-anwa iji mgbe ị hụrụ 'Ngwaọrụ a nwere ike ọ gaghị akwado ya.' mmapụta bụ eriri na-akwụ ụgwọ.
Otú ọ dị, ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla nke na-agbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị nwere ike ime ka njikere pụta. Lelee ngwụcha njikọ njikọ Lightning (akụkụ nke ngwa ahụ nke na-akụ n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị) nke ngwa ị na-achọ iji.
Enwere ihe na-achagharị ma ọ bụ na-efegharị? Ọ bụrụ otu a, ngwa gị nwere ike ịnwe nsogbu ijikọ na iPhone gị. Nke a bụ ikpe na nso nso a maka m, n'ihi na ụfọdụ mmebi nke eriri m na-akwụ ụgwọ mere ka iPhone m nweta 'Ngwaọrụ a agaghị akwado ya.' mmapụta, ọ bụ ezie na m nwetara eriri site na Apple.
Igosi na mmiri nwekwara ike imebi njikọ Lightning nke ngwa gị, yabụ ọ bụrụ na nso nso a, ị wụfuru ihe ọ drinkụ drinkụ na ngwa gị, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe kpatara na anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na eriri gị na-akwụ ụgwọ bụ ngwa nke na-akpata nsogbu ahụ, leekwa anya na njedebe USB. Enwere unyi, lint, ma ọ bụ irighiri ihe ndị ọzọ arapara na njedebe USB? Ọ bụrụ otu a, jiri hichaa mgbochi ma ọ bụ asacha ezé mee ka ọ dị ọcha. Ọ bụrụ na ịnweghị mgbochi mgbochi static, ị nwere ike ịchọta a nnukwu isii-mkpọ na Amazon.
Lelee Anya N’ime Ọdụ Mmiri Gị
Ọ bụrụ na ngwa ahụ dị mma, lee anya n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning na iPhone gị. Ọ bụla egbe, unyi, ma ọ bụ irighiri ihe nwere ike igbochi gị iPhone na-eme ka a dị ọcha njikọ gị ngwa. Ọ bụrụ na 'Ngwaọrụ a enweghị ike ịkwado' ngosi rapaara na ihuenyo ma ọ bụ na ọ gaghị eleghara, nke a bụkarị nsogbu.
Jide ọkụ ọkụ ma lelee anya n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-abụghị nke dị n'ọdụ ụgbọ mmiri Lightning, gbalịa ihicha ya.
Olee Otú m hichaa My iPhone Nchaji Port?
Jidere ihe mgbochi static ahịhịa ma ọ bụ ihe ọhụrụ ezé ezé ma kpochapụ ihe ọ bụla na-ekpuchi ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị. Ego ole ka ị na-apụta nwere ike iju gị anya!
Ozugbo ihichachara ya, nwaa ịgbanye ngwa gị ọzọ. Bugharịa n'elu nzọụkwụ ọzọ ma ọ bụrụ na gị na iPhone ka na-ekwu 'Nke a ngwa nwere ike ọ gaghị na-akwado.'
Nyochaa chaja iPhone gị
Ọ bụrụ na iPhone gị na-ekwu 'Ngwaọrụ a enweghị ike ịkwado' mgbe ị na-anwa ịkwụ ụgwọ ya, enwere ike ịnwe nsogbu na chaja iPhone gị, ọ bụghị eriri Lightning. Lelee anya n'ime ọdụ ụgbọ USB na chaja iPhone gị. Dịka na nke gara aga, jiri ahịhịa mgbochi ma ọ bụ ncha ezé ọhụrụ hichaa egbe, lint, ma ọ bụ irighiri ihe ndị ọzọ.
Jide n'aka na ị na-agbalị odori gị iPhone na otutu dị iche iche chaja. Ọ bụrụ na iPhone gị naanị na-akwụ ụgwọ nsogbu na otu chaja, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ na chaja gị na-akpata nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ị nọgide na-ahụ mmapụta 'Ngwaọrụ a nwere ike ọ gaghị akwado' n'agbanyeghị agbanye chaja ị na-eji, mgbe ahụ chaja gị abụghị nsogbu ahụ.
Accessoriesfọdụ ngwa (ọkachasị ndị nke Apple mere) chọrọ ụfọdụ ụdị nke iOS ka arụnyere na iPhone gị tupu ha enwee ike ijikọ. Gaa na Ntọala -> General -> Mmelite Ngwanrọ na pịa Ibudata na Wụnye ọ bụrụ na ngwanrọ ngwanrọ dị. Lelee ederede anyị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na-emelite gị iPhone .
Tupu ịwụnye mmelite ahụ, jide n'aka na iPhone gị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nwee obere batrị 50%. Mgbe nwụnye ahụ malitere, iPhone gị ga-agbanyụ ma ogwe ọkwa ga-apụta na ngosipụta ahụ. Mgbe mmanya ahụ juputara, mmelite ahụ zuru ezu ma iPhone gị ga-agbanye azụ n'oge na-adịghị anya.
Mee DFU Weghachi na iPhone gi
Ọ bụ ezie na o yighị, enwere obere ohere nsogbu ngwanrọ miri emi na-akpata iPhone gị ịsị 'Ngwa a nwere ike ọ gaghị akwado ya.' Site na ime DFU weghachite, anyị nwere ike iwepu nsogbu ngwanrọ miri emi site na ihichapụ ya na iPhone.
Mkpughe 3:20 pụtara
Mgbe ị na-eme a DFU weghachi, niile nke koodu na gị iPhone ego n'anya ehichapụ na reloaded azụ jidesie gị iPhone. Maka ije ije zuru ezu, lelee nke anyị ndu na-eme a DFU weghachi na gị iPhone !
Ọ bụrụ na iPhone gị ka na-ekwu 'Ngwaọrụ a nwere ike ọ gaghị akwado' mgbe ị gbasoro usoro niile dị n'elu, ị nwere ike ịchọ dochie ngwa gị ma ọ bụ iPhone rụzie. Dị ka m kwuru na mbụ n'isiokwu a, ị nwere ike ịnweta eriri USB na chaja mgbidi nke bịara na iPhone gị dochie ma ọ bụrụ na AppleCare kpuchiri iPhone gị.
O nwekwara ike ịbụ na ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị mebiri emebi ma ọ bụ mebie emebi ma rụzie ya. Ọ bụrụ na AppleCare kpuchie iPhone gị, hazie oge na Apple Store dị gị nso ma nwee teknụzụ lee ya anya. Anyị na-akwado otu a na-achọ ọrụ nrụzi a na-akpọ Puls , nke na-eziga gị onye ọrụ akaebe nke ga-arụkwa iPhone gị ozugbo.
Anyị nọ ebe a Ọ bụrụ na ịchọrọ Nkwado
Ngwa gị na-arụ ọrụ ma iPhone gị na-arụ ọrụ ọzọ. ’Ll ga-amata kpọmkwem ihe ị ga-eme oge ọzọ iPhone gị kwuru 'Ngwa a nwere ike ọ gaghị akwado ya.' Enwere onwe gị ịhapụ ajụjụ ọ bụla na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a!